Josoe 22 - Ny Baiboly
Josoe toko 22
Fiverenan'ireo foko roa sy sasany tany amin'ny faritaniny any atsinanana - Otely naorina teo amoron'i Jordany.
1Dia nantsoin'i Josoe tamin'izay ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fokon'i Manase, 2ka hoy izy tamin'izy ireo: Efa notoavinareo ny zavatra rehetra nandidian'i Moizy mpanompon'ny Tompo anareo ary efa nohenoinareo tamin'izay rehetra nandidiako anareo ny feoko. 3Tsy nandao ny rahalahinareo hianareo, hatramin'izay andro lava izay ka mandraka androany, ka nitandrina tsara ny didin'ny Tompo Andriamanitrareo. 4Ary ankehitriny, efa nomen'ny Tompo Andriamanitrareo fitsaharana ny rahalahinareo, araka ny efa nolazainy taminy; koa modia ary mankanesa any amin'ny lainareo, any amin'ny tany izay anareo, izay nomen'i Moizy mpanompon'ny Tompo anareo any a-dafin'i Jordany. 5Kanefa tandremo tsara ny hanaraka ny fitsipika aman-dalàna nandidian'i Moizy mpanompon'ny Tompo anareo, ka tiava an'ny Tompo Andriamanitrareo, mandehana amin'ny làlany rehetra, mitandrema ny didiny, miraiketa fo aminy, ary manompoa azy ami'ny fonareo rehetra sy amin'ny fanahinareo rehetra. 6Dia nitso-drano azy ireo Josoe ary nandefa azy, ka lasa nankany amin'ny lainy izy ireo. 7Moizy no nanoma faritany, any amin'i Basàna, ho an'ny antsasaky ny fokon'i Manase, ary Josoe kosa no nanome faritany ny antsasany sisa amin'ny rahalahiny aty an-dafin'i Jordany aty andrefana. Nony nampody azy ireo ho any an-dainy Josoe dia nitso-drano azy, 8ka nanao taminy hoe: Hody eny an-dainareo hianareo, mitondra harena be, biby fiompy sesehena, volafotsy, volamena, varahina, sy vy ary fitafiana be dia be, koa zarao amin'ny rahalahinareo ny babo azo tamin'ny fahavalonareo.
9Dia nandao ny zank'Israely tao Silao amin'ny tany Kanaana ny fokon-dRobena sy ny fokon'i Gada, ary ny antsasaky ny fokon'i Manase dia nody nankany amin'ny tany Galaada izay efa noraisiny ho zara taniny araka ny nandidian'ny Tompo tamin'ny alàlan'i Moizy. 10Nony tonga teo amin'ny faritanin'i Jordany, izay anisan'ny tany Kanaana, ny tarana-dRobena, sy ny taranak'i Gada, ary ny antsasaky ny fokon'i Manase, dia nanorina otely teo amoron'i Jordany, ary lehibe no fijery izany otely izany. 11Ren'ny zanak'Israely, fa nisy nilaza hoe: Indreo fa nanorina otely eo amin'ny faritanin'i Jordany, eo anoloan'ny tany Kanaana, amin'ny lafin-tanin'ny zanak'Israely, ny tarana-dRobena, ny taranak'i Gada, ary ny antsasaky ny fokon'i Manase. 12Nony nandre izany ny zanak'Israely dia nivory tao Silao ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra mba hiakatra hamely azy sy hanafika azy.
13Nirahin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada ary ny antsasaky ny fokon'i Manase, any amin'ny tany Galaada, Finea, zanak'i Elezara mpisorona, 14nombany loholona folo lahy, dia loham-pokom-pianakaviana iray avy isam-pokon'Israely, samy loham-pokom-pianakaviana tamin'ny isan'arivon'Israely. 15Nony tonga tany amin'ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada ary ny antsasaky ny fokon'i Manase any amin'ny tany Galaada izy ireo dia niteny taminy nanao hoe: 16Izaono lazain'ny fiangonan'ny Tompo rehetra: Inona izato fahotana nataonareo tamin'ny Andriamanitr'Israely, fa niala tamin'ny Tompo androany hianareo, tamin'ny nanorenanareo otely hodinanareo amin'ny Tompo androany? 17Tsy ampy ho antsika va ny heloka tamin'i Fogora, nefa mbola tsy nahadio tena ho afaka amin'izany isika mandrak'androany, na dia efa nasian'ny loza aza ny fiangonan'ny Tompo, 18no dia miodina miala amin'ny Tompo koa hianareo anio? Raha miodina amin'ny Tompo anefa hianareo anio, dia ho tezitra amin'ny fiangonan'Israely rehetra izy rahampitso. 19Koa raha ny tany fanananareo no heverinareo ho maloto, dia mankanesa any amin'ny tany izay fananan'ny Tompo, izay ipetrahan'ny fonenan'ny Tompo, ka monena any aminay; fa aza miodina amin'ny Tompo ary aza miodina aminay, amin'ny fanorenana otely hafa noho ny otelin'ny Tompo Andriamanitsika, 20Moa tsy Akàna zanak'i Zare va no nanao fahotana, ny amin'ny zavatra natao anatema, moa tsy ny fiangonan'Israely va no nipoahan'ny hatezeran'ny Tompo? Ka dia tsy izy irery no maty noho ny heloka nataony.
21Dia namaly ny tarana-dRobena, ny taranak'i Gada ary ny antsasaky ny fokon'i Manase, ka nanao tamin'ireo mpifehy isan'arivon'Israely hoe: 22Ny Tsitoha, Andriamanitra, Iaveh, ny Tsitoha, Andriamanitra, Iaveh mahalala, ary Israely koa hahalala. Raha fiodinana sy fivadihana amin'ny Tompo izany, dia aza mamonjy anay akory hianao anio, ry Andriamanitra ô! 23Raha ny hiala amin'ny Tompo no nanorenanay, sy ny hanatitra sorona dorana, sy fanatitra ary ny hanao sorom-pihavanana eo amboniny, dia aoka hampamoahin'ny Tompo izany izahay. 24Raha tsy tahotra ny hihatra aminay kosa no nanaovanay izany, fa hoy izahay: Indray andro any, ny taranakareo hilaza amin'ny tanarakay hoe: Mifaninona akory moa hianareo sy Iaveh Andriamanitr'Israely? 25Jordany no faritra nataon'ny Tompo hanelanelana anay sy hianareo, ry tarana-dRobena sy taranak'i Gada, ka tsy manana anjara amin'ny Tompo akory hianareo? Amin'izany ny taranakareo dia hampitsahatra ny taranakay tsy hatahotra an'ny Tompo; 26ka nifampilaza izahay hoe: Andeha isika hanorina otely anakiray, tsy hanaterana sorona dorana, na sorona, 27fa mba ho vavolombelona ho anay sy hianareo, sy ny fara mandimby antsika, fa izahay dia manompo an'ny Tompo eo anatrehany amin'ny sorona doranay, sy ny soronay, ary ny sorom-pihavananay, mba tsy hilazan'ny taranakareo amin'ny taranakay rahatrizay hoe: Tsy manana anjara amin'ny Tompo hianareo. 28Ary hoy izahay: Raha avy izay hilazany izany amintsika na amin'ny taranatsika indray andro any, dia izao no havalintsika indray andro any, dia izao no havalintsika azy: Jereo ny endriky ny otelin'ny Tompo naorin'ny razanay, tsy hanaterana sorona, fa ho vavolombelona ho anay sy hianareo. 29Koa lavitra anay izay hikomy amin'ny Tompo na hiala amin'ny Tompo anio, ka hanorina otely hanaterana sorona dorana, sy fanatitra ary sorona afa-tsy ny otelin'ny Tompo Andriamanitsika, izay eo anoloan'ny fonenany.
30Nony ren'i Finea, mpisorona, sy ny lohan'ny fiangonana, mpifehy ny isan'arivon'Israely izay niaraka taminy ny teny nolazain'ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada ary ny taranak'i Manase dia afa-po izy ireo. 31Ary hoy Finea, zanak'i Eleazara mpisorona tamin'ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada ary ny taranak'i Manase: Fantatray izao fa eto afovoantsika Iaveh, satria tsy nanao izany fahotana izany tamin'ny Tompo hianareo; koa amin'izany, dia efa nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny tànan'ny Tompo hianareo.
32Dia nandao ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada, Finea, zanak'i Eleazara mpisorona sy ny loholona, ka niverina, avy amin'ny tany Galaada, ho any amin'ny tany Kanaana, ao amin'ny zanak'Israely, ka nanao ny filazany tamin'izy ireo. 33Sitraky ny zanak'Israely izany zavatra izany, ka nisaotra an'Andriamanitra izy, ary tsy nihevitra intsony izay hiakatra amin'ireny mba handrava ny tany nonenan'ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada.
34Nomen'ny tarana-dRobena sy ny taranak'i Gada anarana hoe "Ed" ilay otely, satria io, hoy izy, no vavolombalona amintsika roa tonta fa Iaveh no Andriamanitra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0750 seconds